Reality Bites: सुचनामाथि साङ्लो
देशको सर्वाधिक बिक्री हुने, साथै जनजनको ढुकढुकी पहिल्याउन सफल राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुरको शुक्रबारको प्रकाशन अवरुद्ध भएको खबर पाउँदा गला अवरुद्ध भयो । दुर्गम जिल्ला रसुवामा पहिराको नेटो काट्दै आउने बसमा पनि बेलुकीपख कान्तिपुर आएन । त्यो दिनको बिहानी त्यत्तिकै सूचनाविहीन साँझमा अस्ताएजस्तो भयो ।
१५ वर्षदेखि नियमित प्रकाशन भइरहेको कान्तिपुरको इतिहासमा माओवादी सम्बद्ध ट्रेड युनियन
एकाएक कसरी आयो ? प्रकाशन बन्द हुँदा लाखौंलाख जनताको सूचनाले भरिपूर्ण बिहानी खोसिएको महसुस भइरहेछ । के आफ्नो हक र अधिकारको नाममा लाखांै निर्दोष जनताको सामान्य सूचना पाउन संविधानले प्रत्याभूत गरेको मर्ममाथि बज्र प्रहार गर्न पाइन्छ ? कस्तो खालको समाज र राष्ट्रको हामी परिकल्पना गरिरहेका छौं ?
निष्पक्षता र सत्यतासँगै सूचना जनताको अधिकार भनिरहेको प्रकाशन गृहमाथि धावा बोल्दा किन माओवादी नेतृत्वभित्र रहेका वुद्धिजीवीहरू चुपचाप छन् ? एउटा पत्रिका एक दिन बन्द हुँदा त्यसले देश विकासको गतिलाई कति वर्ष पछि धकेल्छ भन्ने अनुसन्धानले बताउला ? सूचनामाथि साङ्लो लाउने प्रयत्न फेरि कसैले गरे जनताले तिनलाई पक्कै पनि सजाय दिनेछन् ।
posted by Reality Bites, Nepal at 9:43 AM